DAAWO SAWIRADDA :Dhagax-dhigii Madarasad ay Hay’adda EAD iyo GH Hoodaale ka hir gelinayaan Tuulada Xaaji Daahir, Gobolka Gabiley |
DAAWO SAWIRADDA :Dhagax-dhigii Madarasad ay Hay’adda EAD iyo GH Hoodaale ka hir gelinayaan Tuulada Xaaji Daahir, Gobolka Gabiley
Madarasaddan oo la aas-aasay sanadkii 1960 ayaa carruurtii tan iyo wakhtigaa wax ku baranayeen meel u eeg xero adhi. Laba sanno ka hor,
– mar ay si wada jira u booqdeen Tuulada Xaaji Dahir – ayaa EAD iyo Hoodaale ku ogaadeen waayaha Melcaamaddaa. Olole xooggan ka dib, waxaa Ilaahay mahaddiiya in EAD iyo Hoodaale ay u suuro gashay sidii carruurtaa loogu dhisi lahaa dhisme cadeedda iyo roobka ay ka hoos galaan. Waxa aannu maanta dhagax dhigney Madarasad ka kooban laba qol iyo baytalmay. Waxaa hawsha dhismaha fulinaya Hoodaale.
Waxaanu halkan uga mahadnaqaynaa Duqa Degmada Gabiley oo isagu kaalmo wax ku oola ka gaystay dhismaha madarasaddan, ballan qaadayna daryeelideeda. Waxa kale oo aanu u mahad naqaynaa cid allaale cidii wax ku darsatay tabarucan lagu dhisayo Madarasaddan.